Tranonkala Malaza Momba Ny Fanatanjahantena Tao Ozbekistàna; Nikatona Taorian’ny Resabe Teo Amin’ireo Mpankafy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2016 17:06 GMT
Malaza any Ozbekistàna ny baolina kitra, na tsy tafita hiady ny Tompondaka Erantany mihitsy aza ny firenena. Sary Wikipedia.
Lahatsoratra mpiara -miasa avy amin'ny EurasiaNet.org ity manaraka ity. Famerenana mamoaka nahazoana alàlana.
Taorian'ny kiana mivaivay nataon'ireo tomponandraikitry ny fanatanjahantena eo amin'ny firenena taminy, toa nikatona ny tranonkala iray goavana miresaka baolina kitra ao Ozbekistàna.
Nanomboka ny 4 Jona, tsy afaka niditra tamin'ilay tranonkala uff.uz ireo mpitsidika, izay sehatra nitoeran'ny fifampiresahana mavitrika ho an'ireo mpankafy baolina klitra ao Ozbekistàna. Mahazo mpitsidika manodidina ny 20-30.000 eo isanandro ilay tranonkala.
Nitranga ny olana taorian'ny lalao am-pirahalahiana nomanina hatao ny 2 Jona hifanaovan'i Ozbekistàna sy Ginea Ekoatorialy saingy nofoanana tsy nasiana fanazavàna. Niezaka ny hampitony ireo mpankafy ihany ny federasiona nasionalin'ny baolina kitra tamin'ny filazàna fa afaka ampiasaina mandritry ny lalao iray hatao amin'ny 2 Septambra hifanandrinana amin'i Siria ireo tapakila novidiana.
Na izany aza, tsy dia nahavita inona hampitoniana ireo mpankafy izany, ary nirodorodo nameno ny uff.uz ireo mpankafy mba hidradradradra ny fanakianan-dry zareo ny federasiona. Ny onjam-panamelohana tahaka izany no toa hitan'ny sasany fa tsara roritina mba hanapahana aina, hanerena ireo mpankafy tsy faly hitodika any amin'ny media sosialy mba hampalàlaka ny toerana.
“Mampiseho tsy fanajàna tanteraka ireo mpankafy baolina kitra ao Ozbeklistàna ilay fanapahankevitry ny federasiona hanafoana ilay lalao. Nahoana izahay no tsy hanana zo hanakiana mibaribary ny asan'io fikambanana io? Tsy tokony ho toy ny fahavalo no handraisanareo ny mpankafy,” hoy ny mpankafy iray tsy faly, Babur Isamov, tao amin'ny kaontiny Facebook.
Nisy famoahana iray miresaka fanatanjahantena nifamatotra tamin'io tranonkala io ihany koa, gazety iray antsoina hoe Chempion, niharan'ny faneriterena.
“Nanazava ny mpitantana ny gazety hoe noho ny olana ara-bola no nanajanonana ny asany ,” hoy ny sampana BBC amin'ny fiteny Ozbek nitatitra
Tsy niloa-bava momba ireo fivoaran-draharaha rehetra ireo ny tranonkala ofisialin'ny federasionan'ny baolina kitra Ozbek.
Tsy ity no raharaha voalohany amin'ny fanivànana ny asa fanaovana gazety miresaka fanatanjahantena tao Ozbekistàna. Tamin'ny Desambra, fandaharana roa iresahana baolina kitra amin'ny fahitalavitra — Soccer Club sy Football Review — no nesorina tao anaty fandaharan'ny fantsona Sport TV. Noroahana ireo mpanatontosa sy mpanolotra ilay fandaharana.
Samy nampiseho hasahiana daholo ireo fandaharana roa ireo nanoloana ireo kiana mavesatra hoe miloka amin'ny lalao sy halatra mody saronana endrika lalao amin'ireo lalao baolina kitra ao an-toerana. Ara-teknika dia tsy ara-dalàna ny fampilokàna ao Ozbekistàna, saingy miroborobo any an-katakonana any izy ireny.
Mpanao gazety ara-panatanjahantena iray nangataka ny tsy hotononina anarana no nilaza tamin'ny EurasiaNet.org hoe inoany fa tsy nampahazo aina ireo tomponandraikitra ny fifanankalozandresaka imasom-bahoaka tsy mihafihafy nifanaovan'ireo mpankafy baolina kitra.
“Ny baolina kitra sy ny fandraharahan'ny show-biz no hany sehatra amelàna sy andeferana ny fanakianana. Ary ankehitriny, na eto aza, efa atombok'izy ireo ny fanakendàna ny feon'ny olona,” hoy ny tenin'ilay mpanao gazety
Mbola misy tranonkala roa miresaka baolina kitra tavela ao amin'ny aterineto Ozbek — championat.asia sy stadion.uz — saingy raha te-ho ela velona izy ireo, dia tsy maintsy manao izay hifehezany ireo mpankafy tsy faly.